Canshuurta Badeecada iyo Adeegyada
1. Riix batanka ‘PLAYLIST’ oo ku yaal geeska kore ee bidixda ee fiidiyowgan si aad u aragto kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan nasteexooyinka canshuurta iyo macluumaadka loogu talagalay shaqsiyaadka.
2. Kani waa kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan nasteexooyinka canshuurta iyo macluumaadka loogu talagalay shaqsiyaadka.
1. Socod-siinta Ganacsiga?
Riix batanka ‘PLAYLIST’ oo ku yaal geeska kore ee bidixda ee fiidiyowgan si aad u aragto kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan nasteexooyinka waxtarka leh iyo macluumaadka loogu talagalay socod-siinta ganacsigaaga.
2. Socod-siinta Ganacsiga?
Kani waa kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan nasteexooyinka waxtarka leh iyo macluumaadka loogu talagalay socod-siinta ganacsigaaga.
1. Riix batanka ‘PLAYLIST’ oo ku yaal geeska kore ee bidixda ee fiidiyowgan si aad u aragto kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan qaar macluumaad sare ah kaas oo ay shaqaaluhu iyo loo-shaqeeyeyaashu ay tahay inay ogaadaan.
2. Kani waa kala doorashadeena qaybaha ay ku jiraan qaar macluumaad sare ah kaas oo ay shaqaaluhu iyo loo-shaqeeyeyaashu ay tahay inay ogaadaan.
Si aad u aragto Fiidyowga qoraladan ka eeg bogga fiidiyowga Soomaliga ah.
Last modified: 10 Dec 2019QC 23831